Koofiyadaha Gawaarida Cagaaran / Madowga Haweenka - Hanukeii
Mararka qaarkood naqshad fudud, laakiin muuqaal ahaan soo jiidasho leh oo leh walxaha lagama maarmaanka ah, ayaa aad uga sii yaab badan kan kale oo lagu rakibo midab ama qurxin. Way fududahay in lagu daro qalab caqli-gal ah oo fudud oo muuqaal ah oo la rakibo halkii laga samayn lahaa dhinaca kale.
Taasi waa sababta gudaha Hanukeii Waxaan dooranay inaanu qaabeyno aruurinta koofiyadaha baseball-ka oo, marka lagu daro gudashada howlaha kahortaga falaadhaha qorraxda ee waxyeelada leh, loogu talagalay inaad iskudarsato dhar caadi ah ama reer magaal ah, dharka xeebta iyo xitaa midka aad isticmaasho ciyaaraha
Koofiyadda waxaa nashqadeeyay xirfadlayaal xagga moodada ah oo go'aansaday in la yareeyo walxaha mashquuliya oo diiradda la saaro kor u qaadista magaca Hanukeii. Si loo siiyo firfircooni dheeri ah, waxay ku dareen, dhawaq la mid ah kan fallaaraha qorraxda ama qorrax dhaca, khadadka qaar ee xadka astaanta sumadda. Naqshaddani waxay ku taal qaab balastar ah xagga hore ee daboolka, kaas oo leh midab cirro leh oo asal ahaan u jiidaya dhinaca cad.
SOO DHAWEYNTII KOONFUR GALBEED
Cunsurka lagu xoojiyay koofiyadeena waa magaca sumadeena: Hanukeii. Magac, dhab ahaantii, sugaya wax badan oo dheeri ah: Hanukeii waa fikrad, eray kaliya ma ahan.
Hanukeii Waxay ka dhalatay fikrad fudud oo anodyne ah oo ka soo ifbaxday gobolka Koonfurta California safar aan ku sameynay dhammaan kooxdii naqshadeeyayaasha iyo wada-xiriirka. Waxaan rabnay inaan ogaano waxa ku qarsoon jidadka dhexdooda, xeebaha iyo muuqaalka dadka.
Kadib dhowr bilood oo aan booqannay Xeebta Laguna, Hyde Street ee California, South Of Market ee San Francisco iyo daawashada, maalinba maalinta ka dambaysa, sida qorraxdu uga dhacayso Badweynta Baasifigga, waxaan go'aansanay in wax kasta oo aan ku qabanno uruurintayada mustaqbalka, waa inay lahaadaan nuxurka in aan si taxaddar leh u soo qaadannay: xasilloonida, carafta badda, xarrago iyo isbeddello.
MAXAY SABAB U AHAY FURASHADA GAADIIDKA?
Marka lagu daro jacaylka nashqaddaha koofiyadaha baseball-ka ee caadiga ah, waxaa aad noogu dhiirrigeliyay taariikhda qalabkan. Waxyaabaha sida fudud loogu qurxiyo ee ciyaartoyda baseball-ka ay mar xirteen si ay madaxooda uga ilaaliyaan qorraxda iyo qabowga, waxay soo mareen maalmaheenna sidii moodel dhammaystiran oo moodal ah, aan waqti lahayn, oo aan jinsi iyo da 'midna lahayn, taasna weligeed ma dhicin.
Naqshadeynta ayaa loo abuuray sidan oo kale, ku dhowaad ujeedo la'aan, ku dhowaad nasiib, iyo saadaasha ay tahay in kaabahan dabeecadda ah uu raacay ayaa nagu dhiirrigelinaya inaan sii wadno abuurista iyo ka fikiridda siyaabo cusub oo lagu daboolayo baahiyaha macaamiisheena, maxaa yeelay yaa garanaya waxa mustaqbalka ku jira anaga.